July Dream: New husband?
ဟုတ်ပဗျာ...ကျနော် လည်း အမြင်ကတ်နေတာ..
မင်းကျန်စစ် ကတည်း က သမိုင်းကို ပြတာ..မိန်းမ အများကြီး
ယူတာပဲ ပါတယ်...အမြင်ချင်းတော့ တူသွားပြီဗျို့ ..
ဒီမင်းသားနယ် ရာရာစစ၊ မတူမတန်၊ အနူလက်နဲ့ ရွှေခွက်နှိုက်၊ အမဲရိုးနှယ် ဟင်းအိုးမှ အားမနာ ... (နောက် ဘာကျန်သေးလဲဟင် ကိုဂျူလိုင် ...)
တွတ်ပီနေရာ သရုပ်ဆောင်ရအောင် သူ့ကိုယ်သူ ဘာများမှတ်နေလဲ မသိ။ ပြောလိုက်စမ်းဘာ .... ပြောလိုက်စမ်းဘာ ... ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် နေပါလို့။
ပြာလောင် ကို လွမ်းတယ်။
ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးတည်းက သဘောပေါက်ပါပြီဗျာ။ ဆရာဆွေမင်းသာ ရှိသေးလို့ ကတော့ ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလားလို့တွတ်ပီအစား သူအော်ရတော့မှာ။
:( ဟင်း တွတ်ပီတောင်အလွတ်မပေးဝူး...
တွားပြီး တွတ်ပီတော့လစ်ပီ..တနားပါတယ်.. :((
ပြီးတော့ ကမ္ဘာကျော်Disneyကတောင်သူ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုလူနဲ့အစားထိုးပြီး ဘယ်တုန်းကမှ ဇာတ်လမ်းမရိုက်ဖူးဘူးလို့ထင်ပါတယ်..မီးငယ်ထင်တာကတော့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ရဲ့စရိုက်ပျက်သွားမယ်ဆိုးလို့မရိုက်တာပါ။ ကာတွန်းကာရိုက်တာနဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်...
ဟုတ်တယ် လူမင်းကို ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ မင်္ဂလောဆောင်တယ်ကြားကတည်းက အော်ဂလီဆန်တာလေ...
ပြီးတော့ လူမင်းရုပ်က နဂိုကတည်းက ဗီလိန်ရုပ် လူယုတ်မာရုပ် တွတ်ပီဆိုတာကလဲ သူဥပဓိနဲ့ လားလားမှ မထိုက်တန်တဲ့ ဇတ်ရုပ်ပဲ...
တွတ်ပီဆိုတာ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးတစ်ခု...တွတ်ပီနဲ့ ဗိုက်ကလေး တောထွက်တဲ့ အခန်းဆိုရင် ပြေးပြေး မရှောင်ရင် လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ တောကောင်လေးတွေထွက်ပြေးကြတဲ့အခန်းက သိပ်ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်
အခုသူပုံက မြန်မာစစ်ဗိုလ် လူဝတ် ၀တ်ထားတဲ့ရုပ်...စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့အစ်မ တူးတူးသာပြောသလို ဒီမင်းသားနယ် ရာရာစစ၊ မတူမတန်၊ အနူလက်နဲ့ ရွှေခွက်နှိုက်၊ အမဲရိုးနှယ် ဟင်းအိုးမှ အားမနာ ...နှာဘူး အသံကိုက လူသံမပေါက် နှာသံပေါက်နေတဲ့ အကောင် ထွီ..
ငယ်ငယ်တည်းက တွတ်ပီတို့၊ သမိန်ပေါသွပ်တို့ကို ဖတ်တာ... ခုထိပဲ...
တွတ်ပီ ကံမကောင်းပါလားနော်... :(
လူမင်းက ရတနာဝင်းထိန်ရဲ့ ဇတ်လမ်းတွေရိုက်ရမှာဗျ။ သူ့ဇတ်ရုတ်က အဲဒီထဲက မင်းသားတွေနဲ့ လိုက်တယ်
အင်း လုပ်ပေါ့ဗျာ သူတို့ခေတ်ပဲ သူတို့မှမဖျက် ဘယ်သူဖျက်မှာတုန်း။
ဟုတ်ပါ့ ဆရာဆွေမင်း ရှိသေးရင် ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆိုတာ ဆရာဆွေမင်းပဲ ပြောရတော့မှာ
အင်း...ဇတ်ကားထွက်လာမှပဲ သုံးသပ်ရမှာပဲ။ ဟုတ်တော့ဟုတ်သည် ၊ လူမင်း နှင့် တွတ်ပီ ။ အကယ်၍ လူလက်မခံနိုင်လောက်အောင် ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက ဒါရိုက်တာကို လူရွေးမတတ်လိုက်တာလို့ အပြစ်တင်စရာသာရှိတော့မည်။
ဟုတ်ပါ့အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်လည်း နှစ်ခုလုံးဖတ်လိုက်ရတယ် ။ လူမင်းတင်မကဘူးဗျ။ ဒါရိုက်တာမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်ထင်တယ်။ ဖျက်လိုဖျက်စီး လုပ်နေကြတာ။
ကျန်စစ်မင်းကားကြည့်တုန်းက ဇာတိမာန်တွေ တဖွားဖွားထကြလား မထကြလားတော့ မသိဘူး။ လူမင်းကြီး မိန်းမတစ်ယောက်ယူပြီး စစ်ထွက်သွားတိုင်း အလွမ်းခန်းဖြစ်ရမဲ့အစား ရုံထဲမှာ ရယ်ကြတာ ဟာသကားကျနေတာပဲ။ အဲဒီလောက်ထိ ပြောင်မြောက်တာ။
လူမင်းနဲ့ ဆရာတွတ်နဲ့ ဘယ်နေရာကိုများကြည့်ပြီး ရွေးပလိုက်ပါလိမ့်။ မင်းသားအဲဒီလောက်ရှားနေရင်လဲ
ဂျုလိုင်ရေ တို့တွေ ပြည်တော်ပြန်ပြီး ဇာတ်လိုက်လုပ်ကြစို့ရဲ့။
တွတ်ပီတော့ ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား လို့အော်လိုက်ရမယ်ထင်တယ် :)
အရင် ပိစိနဲ့ ရိုက်ဖူးတယ်ထင်တယ်။
အဲဒါလည်း ရသ မပေါ်ဘူး။
I can't understand how director choose "LU MIN" asa"Toot Pe".
If director chose " LU MIN" asa"Bite Ka Lay", better than " Toot Pe".
ဖြစ်ရလေ ကတွတ်ပီ ရယ်..
ခက်တော့တာပဲ.. ခက်တယ် ခက်တယ်..
ဆရာဆွေမင်း ရင်နဲ့ ရေးခဲ့.. ဆွဲခဲ့.. ပေးခဲ့.. တာတွေကို ဖျက်စီးကြတော့မယ်..
အော်.. မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက.. ရင်လေးတယ်..
ကတုံးလဲမဟုတ်၊ အောက်က ဖိနပ်ကြီးကလဲ တလွဲ လုပ်ထားမှတော့ တွတ်ပီဇတ်ရုပ် ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မှာလဲ။ စိတ်ကုန်လိုက်တာနော်
ဓာတ်ပုံအမြင်အရတော့ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ :(
ထူးဆန်းပါပေ့ ကတွတ်ပီ မသေးမျှင်က နာမည်ကသာသေးမျှင်တာ လူကအယ်စတုံ ထွမ်းအိမ်သာဘို လုပ်မှာလား ဖင်လဲမချိပဲနဲ့ ...တွတ်ပီက ရိုးသားပြီး အမြင်မကျယ်ပေမယ့် အမြော်မြင် ကြီးမားတဲ့ရုပ် လူမင်းကတော့ ရိုးသားတဲ့ ရုပ်တစက်မှ မပေါက် ချိတ်ညစ်လိုက်တာ နှမောတယ် ကတွတ်ပီရယ်..
မသေးမျှင်လုပ်မယ့်လူလဲ မလိုက်၊ ကတွတ်ပီ လုပ်မယ့်လူလဲ မလိုက်ပါဘူး မျက်စေ့ထဲ ဘယ်လိုမှ ၀င်မယ်မထင်ဘူး။ ကိုဂျူလိုင်ရေ.. စိတ်ညစ်တဲ့အထဲ အဲဒါတွေလဲ ပါတယ်။
မြိုင်ရာဇာ တွတ်ပီ ကောင်းရာသုဂတိလားရာမှ ထ မဆဲပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ တွတ်ပီ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ လူမင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ
ဟပ်စပ်လို့ ကို မရပါဘူး ..
ဒါရိုက်တာကိုပဲ အပြစ်တင်ရတော့မှာပေါ့ ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့်တော့ ကြည့်ရတော့မှာပဲဗျို့
လူမင်းက သူဌေးသမီးနဲ့ရပြီး လုပ်တိုင်းဖြစ်မယ်ထင်လို့ လုပ်နေတာ။ ရန်ကုန်မှာ ပြောစမှတ်တွင်တာက လူမင်းရဲ့ လင့်ခ်ခရူဇာကြီးကို ကျန်စစ်မင်းစီးသွားပြီတဲ့။ အဲဒီလောက်တောင် ရှုံးသွားတာဗျ။ အပီအပြင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီး အဲဒီခေတ်က မပေါ်သေးတဲ့ ဖဲလ်သားအင်္ကျီတွေဝတ်ပြီး ရိုက်တာလေ။ အမြင်ကတ်လို့ သွားကို မကြည့်ဘူး။ အခု တွတ်ပီ ရုပ်ရှင်ထွက်လည်း လုံးဝ (လုံးဝ)မကြည့်ပါ။ တွတ်ပီကို ကာတွန်းအနေနဲ့ အသည်းစွဲအောင် ယနေ့ထိ (ကလေးအဖေဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်) ပြန် ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ မည်သူသရုပ်ဆောင်ဆောင် လုံးဝ မကြည့်ပါ။
မှတ်မိသေးတယ် ကျန်စစ်မင်းတုန်းက နှစ်ယောက်သွားကြည့်ကြတာ နှစ်ယောက်စလုံးက အရယ်သန်သန်နဲ့ အူလှိမ့်အောင်ရယ်ရတာကို.. ရုံထဲကပြန်ထွက်လာတော့ စိတ်လည်းတို အရယ်လည်းမရပ်ချင် အူလည်လည်ကြီး...အခုလည်း တို့အသည်းကျော်ကြီး ကတွတ်ပီတော့ စပြီး.. ကံမကောင်းပါလားပဲ...ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်တဲ့ မင်းသား မင်းသမီး မရှာရဲတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုလည်း....ဟင်း........း(
တွတ်ပီလက်သစ် ကျန်စစ်မင်းကြီးရဲ့ အသံလေးလဲ နားဆင်ကြည့်ကြပါဦးဗျာ ။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်နော် ။ စက်လေးမှာ စိုးရင်လည်း နားထောင်ပြီးပြန်ဖျက်လိုက်လို့ရနေတာပဲ ။ အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ အားနာပါတယ်ဗျာ ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို သူတော်ကောင်းအယောင်ဆောင် အကြောင်း သိထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ ။ http://www.mediafire.com/?cjxu9nbzloc
ဩော်..မေ့နေလို့ ... အဲဒါကိုတင်ထားတဲ့ ဘလော့ တခုတော့ရှီတယ်။ အမျိုးသမီးတွေတော့ မသွားသင့်ဘူးထင်တယ်။ porn blog ဖြစ်နေလို့... http://mmtoday.blogspot.com/2008/08/soemyatnandarsextalk-lumin.html
အင်းသွားရှာပြီပေါ့ ဆရာဆွေမင်းရေလို့ပဲအော်ရတော့ မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တစ်ခုတော့ သွားပြန်ရှာပါပေါ့လား ဒီရုပ်ဒီရေနဲ့ဘယ်နဲ့ တွတ်ပီတဲ့
မသေးမျှင်ကလဲကြည့်ကြပါဦး မျက်စိထဲမြင်ယောင်ကြည့် ရုံနဲ့ အချိုးကလုံးဝကိုမပြေတာ ဟိုဗိုက်ကလေးလုပ်မဲ့ လူကလဲကြည့်ပါဦး အင်းဖြစ်ရပလေဆရာဆွေးမင်းရေ လို့သာ...မြည်တမ်းရုံမှအပ ဘာများတတ်နိုင်ပါမည်နည်း သူတို့ခေတ်ကြီးကိုး